Nahoana no Channel Tionelin'i zava-dehibe ho Eoropa? | Save A Train
Home > Travel Europe > Nahoana no Channel Tionelin'i zava-dehibe ho Eoropa?
Tsy ela taorian'ny Channel Tionelin'i maro antsointsika hoe ny Eurostar Tionelin'i nisokatra in 1994, dia antsoina hoe iray amin'ireo zava-mahatalanjona fito ny Modern Tontolo. Araka ny Fikambanana Amerikanina ny Civil injeniera, fa anaram-boninahitra ary tsara mendrika. Ary nampidiriny ny Channel Tionelin'i teo anivon 'ny an'ireo trano fahagagana tahaka ny Empire State Building sy ny CN Tower.
Ny Eurostar Tionelin'i tokoa dia ho fahagagana sy goavana Feat ny fanorenana. Nahoana anefa no tena zava-dehibe ho Eoropa? Inona ny fiantraikan'ny, ary izay tanàna mety tonga amin'ny alalan'ny fampiasana lavitra azy io? Ndeha isika handinika ny Channel Tionelin'i heviny:
Tantaran 'ny Eurostar Tionelin'i
Na dia ny fanorenana ny Channel Tionelin'i nanomboka tamin'ny 1988, tsy midika fa ny hevitra dia vaovao. Na dia atao kilalao io Napoleon ny hevitra hoe mampifandray Angletera sy Frantsa alalan'ny tonelina. eo anatrehany, Zavatra injeniera Albert Mathieu-Favier voalohany nanolo-kevitra toy izany amin'ny tonelina 1802. Ny foto-kevitra ahitana nosy artifisialy teny an-dalana, toy ny soavaly-miovaova peo. Na izany aza, drafitra indrindra ireo intsony raha tsy taorian'ny Ady Lehibe Faharoa.
In 1987, ny parlemanta ao Angletera sy Frantsa nanaiky tamin'ny farany mba hanorina ny Channel Tionelin'i. Ny tetikasa ahitana ny fanorenana ny telo tonelina - fiarandalamby roa noho ny fifamoivoizana ary ny iray ho toy ny fanompoana tonelina. Ny fampandrosoana naka enin-taona, $7.2 lavitrisa, iraika ambin'ny folo lahy Boring milina, ary 13,000 mpiasa. Ny vola dia mitovy amin'ny ankehitriny $12 lavitrisa.
Channel Tionelin'i Facts
Ny Channel Tionelin'i dia 31.35 kilaometatra ny lavany, miaraka amin'ny fizarana anaty rano ny 23.5 kilaometatra. Izany indrindra undersea fizarana lehibe eto amin'izao tontolo izao izay mitantana 250 Ny haavon'ny ambany fandriana ny ranomasina amin'ny ambany indrindra ny fotoana. The tonelina mampifandray Folkestone tany Angletera amin'ny Coquelles, Pas-de-Calais in Frantsa. Izany nihazakazaka ambanin'ny Anglisy Channel ao amin'ny Andilan-dranomasin'i ny Dover.
Inona no mahatonga ny Channel Tionelin'i manokana dia izy no hany connector an'i Grande-Bretagne sy ny Tanibe Eoropa. ary amin'ny fiarandalamby haingam-pandeha misy ankehitriny, izany iray amin'ireo fomba haingana indrindra mba handeha amin'ny UK amin'ny tanibe Eoropa.
Ny fiantraikan'ny fanokafana ny Channel Tionelin'i
Ny Eurostar Tionelin'i dia nilalao ny anjara toerana goavana eo amin'ny fanaovana lalamby dia lavitra idirana fanindroany. Tena mankasitraka azy io izy ireo ao amin'ny UK, araka ny nataony azo atao ny handeha ho any Europe tsy misy manidina. Manampy mpandeha mampihena ny vola lany amin'ny lavitra, ary koa ny dian-tongotra carbone. Eurostar Tombanan'ny lavitra avy any London ho any Paris lamasinina Mamoaka 90% tsy entona mandatsa-dranomaso famoahana entona noho ny mandray ny fiaramanidina.
Ny ampahany tsara indrindra momba ny Channel Tionelin'i dia ny fifandraisana amin'ny lehibe Eoropa lalamby tambajotra. mampiasa azy io, dia afaka mahazo ny ankamaroan'ny tanàna eoropeanina lehibe avy any UK. Ary aoka isika tsy hanadino fa azo atao ihany koa ny hanatratra ny UK toy ny tanàn-dehibe London tsy manidina. Tena ho takatry ny, fifadian-kanina sy ny fomba azo antoka mba handeha.
Londres mankany Lyon Highsped Train
Raha ny Channel Tionelin'i mahaliana anao, maka mitaingina ny alalan 'izany! Ilay dia mety tsy ho Toerana mahafinaritra, fa ny antso dia miankina amin'ny tsy hanahirana. Raha toa ka mila ho any an-tanàna na avy any Angletera, boky ny saran-dalana amin'izao fotoana izao!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fchannel-tunnel-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml ary afaka hanova ny / ja ny / de na / fiteny azy sy ny maro hafa.
#channeleltunnel #traveleurope europetravel eurostar eurotrip London longtrainjourneys trainjourney Tranride fiaran-dalamby soso-kevitra Train Travel fiaran-dalamby Travel torohevitra travelfrance